Nitotongana hatrany amin’ny 14% moa tamin’ny herinandro lasa iny ny vidin’ny solika teo amin’ny tsena iraisam-pirenena noho ny Coronavirus; hisy ny fivoriana ataon’ny OPEP any Vienne – Autriche amin’ity herinandro ity mba hikarohana ny hevitra tsy hampiaka-midina io vidin-tsolika io. Mety ho tafiditra ao anatin’ny fepetra horaisina ny fampihenana ny famokarana solika amin’izay tsy mitotongana ny vidiny.Tena nihena be mantsy ny fanjifana solika maneran-tany noho ny Coronavirus satria nihena ny fividianan’ny Sinoa solika ary izy dia anisan’ny mpanjifa solika betsaka indrindra maneran-tany. Nihena ny fihodinan’ny ozinina sy ny fifamezifezena tany Chine ka izay no antony nampihena ny fividianany solika, ary tsy tany ihany fa tamina firenena hafa ihany koa izay misy ity valan’aretina ity. Manara-maso akaiky io fivoriana hitranga any Vienne io ihany koa ny kaontinanta Afrikanina satria efa tafiditra ao Senegal sy Nizeria izao ny Coronavirus.